ကိုဗစ် စည်းကမ်းနဲ့အညီ ဘောလုံးဆော့ရာမှ (၃၇)ဂိုးအထိအသွင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံးအသင်း – အောငျနိုငျသူ
ကိုဗစ် စည်းကမ်းနဲ့အညီ ဘောလုံးဆော့ရာမှ (၃၇)ဂိုးအထိအသွင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံးအသင်း
Aung Naing Thu | September 24, 2020 | International new | No Comments
ဂျာမန်က ဘောလုံးအသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်းကို (37-0)ရလဒ်နဲ့ အရှက်ကွဲပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ထို ဘောလုံးအသင်းကတော့ ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခပ်ခွာခွာနေရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းကို
အပြည့်အဝ လိုက်နာခဲ့တာကြောင့်ဘဲ ယခုလိုမျိုး လွန်ကဲစွာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလို့ ဆိုပါတယ်နော်။အဆိုပါ ဘောလုံးအသင်းနာမည်ဟာ SG Ripdorf/Molzen II လို့ သိရပါတယ်နော်။
အပျော်တမ်း ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်း ဖြစ်ပြီတော့ ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းကြောင့်ဘဲ ဘောလုံး လိုက်လုတာမျိုးလဲမလုပ်ဘဲ အချင်းချင်း အနီးကပ် အပေးအယူ လုပ်တာမျိုးကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေဟာ အခုပွဲစဉ်မှာ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ထက် နည်းနည်းပဲ ပိုတယ်လို့ ဆိုတာပါ။ပြိုင်ဘက်အသင်းက အခွင့်အရေးတွေကို အသုံးချပြီးတော့ ဂိုးတွေ တဖုန်းဖုန်း သွင်းနေတာတောင်မှ သူတို့တစ်တွေဟာ ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းကို ငြင်းပယ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြသေးပါဘူးတဲ့။
ထို ဘောလုံးသင်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့မိလို့ ခုလိုမျိုး သမိုင်းမှာထင်ကျန်စေမယ့် အမည်းစက်အရှုံးကြီးကို လက်ခံလိုက်ရတာပါ။
သိရသလောက်တော့ သူတို့ဟာ ကွင်းထဲကို (၁၁)ယောက် အပြည့်မဝင်ဘဲနဲ့ (၇)ယောက်ဘဲ ဝင်ကစားစေခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်အသင်း SV Holdenstedt II ကလည်း ခြေစွမ်းမာကျောတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ကို မညှာမတာ ဂိုးတွေသွင်းယူ နှိမ်နင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကတော့ ဂျာမန်ဘောလုံးအဆင့်မှာ အနိမ့်ဆုံးလိဂ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ြ့ပီးတော့ Ripdorf အသင်းနဲ့ ပြိုင်ဘက်အသင်းတို့ဟာ Lower Saxony ပြည်နယ်၊ Uelzen မြို့မှာ တည်ရှိတဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက်တွေပါ။
ဘောလုံးလိဂ်အမည်မှာ 3. Kreisklasse လို့ သိရပြီး၊ လိဂ်အဆင့်အတန်း နိမ့်ပေမယ့်လည်း ဒီကနေ နိုင်ငံအတွက်သာမက ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတွေ အမြောက်အများ မွေးထုတ်ပေးရာ လိဂ်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်
ဒေသတွင်းမှာတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်ကြနေတာပါ။ Ripdorf အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလဲ ပြိုင်ဘက်အသင်းမှာ ပိုးတွေ့ကစားသမားတစ်ဦး ပါလာကတည်းက ပြိုင်ပွဲတွေကို ရပ်နားဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ပွဲစဉ်တွေရပ်နားဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့် Ripdorf အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲတိုင်းကို စိတ်မချရတဲ့အနေအထား ရှိနေသေးသရွေ့ (၇)ယောက်တည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ကစားဖို့ရှိပါတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေကတော့ ဒေါသူပုန်ပွနေကြပြီးတော့ အသင်းကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာ တစ်ပွဲကို (၇)ယောက်တည်း ကစားတဲ့ရလဒ်တွေလောက် ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဝေဖန်ခဲ့ကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။source;လင်းသုတ
Unicode…ကိုဗဈ စညျးကမျးနဲ့အညီ ဘောလုံးဆော့ရာမှ (၃၇)ဂိုးအထိအသှငျးခံခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံးအသငျး
ဂြာမနျက ဘောလုံးအသငျးဟာ ပွိုငျဘကျအသငျးကို (37-0)ရလဒျနဲ့ အရှကျကှဲပွီး ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။ထို ဘောလုံးအသငျးကတော့ ကိုဗဈစညျးမဉျြးတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ခပျခှာခှာနရေမယျဆိုတဲ့ စညျးကမျးကို
အပွညျ့အဝ လိုကျနာခဲ့တာကွောငျ့ဘဲ ယခုလိုမြိုး လှနျကဲစှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရတာလို့ ဆိုပါတယျနျော။အဆိုပါ ဘောလုံးအသငျးနာမညျဟာ SG Ripdorf/Molzen II လို့ သိရပါတယျနျော။
အပြျောတမျး ဘောလုံးအသငျးတဈသငျး ဖွဈပွီတော့ ကိုဗဈစညျးမဉျြးကွောငျ့ဘဲ ဘောလုံး လိုကျလုတာမြိုးလဲမလုပျဘဲ အခငျြးခငျြး အနီးကပျ အပေးအယူ လုပျတာမြိုးကိုလညျး ရှောငျကွဉျခဲ့ကွတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။
သူတို့တဈတှဟော အခုပှဲစဉျမှာ ပှဲကွညျ့ပရိသတျထကျ နညျးနညျးပဲ ပိုတယျလို့ ဆိုတာပါ။ပွိုငျဘကျအသငျးက အခှငျ့အရေးတှကေို အသုံးခပြွီးတော့ ဂိုးတှေ တဖုနျးဖုနျး သှငျးနတောတောငျမှ သူတို့တဈတှဟော ကိုဗဈစညျးမဉျြးကို ငွငျးပယျဖို့ မဆုံးဖွတျနိုငျကွသေးပါဘူးတဲ့။
ထို ဘောလုံးသငျးဟာ ကနျြးမာရေးကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့မိလို့ ခုလိုမြိုး သမိုငျးမှာထငျကနျြစမေယျ့ အမညျးစကျအရှုံးကွီးကို လကျခံလိုကျရတာပါ။
သိရသလောကျတော့ သူတို့ဟာ ကှငျးထဲကို (၁၁)ယောကျ အပွညျ့မဝငျဘဲနဲ့ (၇)ယောကျဘဲ ဝငျကစားစခေဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။ ပွိုငျဘကျအသငျး SV Holdenstedt II ကလညျး ခွစှေမျးမာကြောတဲ့အသငျးဖွဈပွီး သူတို့ကို မညှာမတာ ဂိုးတှသှေငျးယူ နှိမျနငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့တနင်ျဂနှနေကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲကတော့ ဂြာမနျဘောလုံးအဆငျ့မှာ အနိမျ့ဆုံးလိဂျပွိုငျပှဲဖွဈွ့ပီးတော့ Ripdorf အသငျးနဲ့ ပွိုငျဘကျအသငျးတို့ဟာ Lower Saxony ပွညျနယျ၊ Uelzen မွို့မှာ တညျရှိတဲ့ မွို့ခံပွိုငျဘကျတှပေါ။
ဘောလုံးလိဂျအမညျမှာ 3. Kreisklasse လို့ သိရပွီး၊ လိဂျအဆငျ့အတနျး နိမျ့ပမေယျ့လညျး ဒီကနေ နိုငျငံအတှကျသာမက ကမ်ဘာကြျောကစားသမားတှေ အမွောကျအမြား မှေးထုတျပေးရာ လိဂျဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့
ဒသေတှငျးမှာတော့ ပွိုငျဆိုငျမှုတှေ ပွငျးထနျကွနတောပါ။ Ripdorf အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ပှဲစဉျတုနျးကလဲ ပွိုငျဘကျအသငျးမှာ ပိုးတှကေ့စားသမားတဈဦး ပါလာကတညျးက ပွိုငျပှဲတှကေို ရပျနားဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
တာဝနျရှိသူတှကေတော့ ပှဲစဉျတှရေပျနားဖို့ ငွငျးဆနျခဲ့တာကွောငျ့ Ripdorf အသငျးဟာ ပွိုငျပှဲတိုငျးကို စိတျမခရြတဲ့အနအေထား ရှိနသေေးသရှေ့ (၇)ယောကျတညျးနဲ့ ရငျဆိုငျကစားဖို့ရှိပါတယျ လို့ဆိုပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ပရိသတျတှကေတော့ ဒေါသူပုနျပှနကွေပွီးတော့ အသငျးကို ဖကျြသိမျးလိုကျတာဟာ တဈပှဲကို (၇)ယောကျတညျး ကစားတဲ့ရလဒျတှလေောကျ ဆိုးမှာမဟုတျဘူးလို့ ဝဖေနျခဲ့ကွတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။source;လငျးသုတ
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်ကျန်းမှာ လူပေါင်း ၅ သန်းလောက် ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမည်
ကျီးကန်းတွေရဲ့ အငြိုးနဲ့ လက်စားချေတာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသား
ဇက်ကို မကြာခဏ တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်အောင် ချိုးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အဖြစ်